पुथा उत्तरगंगा गाउँ पालिकाको भविष्य भन्नु नै यहाँका प्राकृतिक सम्पदाहरुमा निहित छ- ओम प्रसाद घर्ति मगर – RadioMBC
Home > बिचार/अन्तरबार्ता > पुथा उत्तरगंगा गाउँ पालिकाको भविष्य भन्नु नै यहाँका प्राकृतिक सम्पदाहरुमा निहित छ- ओम प्रसाद घर्ति मगर
१७ मंसिर २०७४, आईतवार ११:११
(२०१० सालमा तत्कालीन हुकाम गाबिस ( अहिलेको पुथा उत्तरगंगा गापा ) १९ बर्षको कलिलो उमेरमा तत्कालीन पञ्चायतकालमा प्रधानपञ्च भएर राजनीतिमा लागेका ओम प्रसाद घर्ती मगर २०३४ साल देखि नै अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा लागेको बताउँछन् । २०५२ सालको जनयुद्धको अग्रिम मोर्चामा लागेर आफ्नो सिङ्गो जीवन अर्पेका उनै घर्ती मगर २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा गाउँपालिकाको गरिमामय अध्यक्ष पदमा अत्याधिक बहुमतले विजय भएका थिए । यसपाली उनै अध्यक्ष घर्ती मगरसँग पोष्टपाटीका संवाददाता कर्मसही घर्ति मगरले लिनुभएको अन्तरवार्ता यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं-)
– सर्वप्रथम गाउँ पालिका जस्तो अत्यन्त गरिमामय पदमा पदभार गर्दा कस्तो अनुभव गर्नु भयो र आफ्नो गहन जिम्मेवारी के हो जस्तो लाग्छ ?
पहिलो कुरा त मेरो त्याग र लगानीको बिषयमा युवा साथीहरूले यसले केही गर्न सक्दैन भनेर मिनिमाइज गरे जस्तो दुखद अवस्था थियो । म आफ्नो उद्देश्य प्रति अनवरतरुपमा लागि रहेछु । हिँडि रहेछु । भिडि रहेछु । त्यत्रो जनयुद्ध लडियो, आफ्नो तर्फबाट आफुले गर्नु पर्ने हरेक काम कार्य इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्दै आईयो । बीचमा केही मूल्यांकन भएन । अझ मलाई मिनिमाइज गरेर जाँदा, यो के हो त ? के म साँच्चै कुनै कार्य गर्न योग्य छैन ? भनेर आफैले आफैलाई प्रश्न गरेँ । जनयुद्धको पछि शान्तिकालीन अवस्थामा पार्टी र संगठन पूरा छिन्नभिन्न भएको विदितै थियो । यस्तो अवस्थामा पनि मैले सबै साथीहरुको समर्थन जुटाउन सफल भएँ । जनताको अधिक माया पाएर आज म पालिकाको अध्यक्ष भएँ । संगठन भित्रैबाट बेवास्ता गर्न लागिएको म चुनावमा जनताको उल्लासमय निर्णयले आज पदभार गर्न पाउँदा निकै नै खुशी छु । म पुन: गहन जिम्मेवारी पाएको महसुस गरेको छु ।
कर्मचारीतन्त्रले बाधा पारिरहेको यो विकराल परिस्थितिमा पनि जनताको न्यायोचित कार्य गर्न म कदापि पछि हट्ने छैन । सबैको भावनाको म सदा कदर गर्दछु । यदि मेरो तर्फबाट पूरापूर केही गर्ने प्रकृयामा अलिकति कमजोरी देखियो भने मलाई सहि सलामत रुपमा भन्दा पनि हुन्छ । आखिर जसरी हुन्छ जनता र गाउँ टोलको सेवा गर्नु न हो ! त्यसैले पुथा उत्तरगंगा गाउँ पालिकामा मेरो अत्यन्त गहन जिम्मेवारी थपिएको छ । मैले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मको कार्य यथोचित गर्ने नै छु ।
– तपाईंका अल्पकालीन (एक बर्ष भित्र गर्नु पर्ने काम) योजना के के छन् ?
यो अवधिमा चाहिँ बर्षभरिमा गर्नु पर्ने कामहरु नै पर्छन् । जस्तै शिक्षा , स्वास्थ्य , बिजुली, कृषि लगायतका कुरालाई प्राथमिकता दिएका छौं । जो पालिका भित्रकै वडाहरुको रोहवरमा गरिनेछ । जनताको आवश्यकता र चाहनाको कदर गरेर अगाडि बढिनेछ ।
– दीर्घकालीन योजनाको बारे केही प्रकाश पार्दिनु हुन्छ कि !
पुथा उत्तरगंगा गाउँ पालिकाको भविष्य भन्नु नै यहाँका प्राकृतिक सम्पदाहरुमा निहित छ । मेरो पहिलो प्राथमिकताको बिषय नै यी नदीहरुको उपभोग गर्नु हुनेछ । यहाँका प्रत्येक गाउँ टोलहरु उज्यालो पार्नु , प्रत्येक बिद्यालयहरुमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि पहल हुनेछ । यहाँका हाम्रा संस्कार र संस्कृतिलाई लिपिबद्ध गर्नुछ । खेलकुदलाई प्राथमिकता दिनुछ । पर्यटनलाई बढावा दिनुछ । पुरानो कृषि प्रणालीको ठाउँमा आधुनिक कृषि प्रणालीको बढावा दिनुछ । दलितका बाहुल्यता रहेका बस्तीमा दलित नमुना बस्तीलाई स्थापित गरिनेछ । प्रत्येक वडाहरुलाई विकासका ढोका खोलि दिनुमा नै मेरो तन मनलाई समर्पित गर्नेछु । सञ्चारलाई स्थायित्व दिनु छ । बाँकि कुरा समय र आवश्यकताले सुझ्याउनेछ ।
-हाम्रा कला संस्कृतिको संरक्षणको लागि अत्याबश्यक छ । संरक्षणको अभावले सबै लोप हुने संभाबना देखिएको छ । यसले कला संस्कृतिप्रेमिहरुमा एक किसिमको नैराश्यता छाएको छ। के छ समाधानको उपाय ?
म आफै कला संस्कृतिको बीचमा हुर्कि बढेको मान्छे हुँ । यी गीत तथा नाचहरुबाट निकै प्रभावित छु । यो हाम्रो पालामा एकदम प्राथमिकताको कुरा पनि थियो । अहिले आएर नयाँ पिँधिले यसबारे ध्यान नदिनु दु:खद कुरा त हुँदै हो यद्यपि हामीले नै यसको संरक्षण र जगेर्ना गर्न नसकेकोले नै नयाँ पिँधिलाई वास्ता नभएको हो जस्तो मलाई लाग्छ । नेपाल भरि छरिएर रहेका मगरहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने यस खालका कला संस्कृतिको बृहद दङ्गबाट न्यायोचित संरक्षण तथा समबर्धन हुनु अत्याबश्यक छ । हाम्रो यो पालिकाका प्रत्येक वडामा जीवित रहेका कला संस्कृति जस्तै गीतमा नानीला , सालम्बो , सिँगारु , झ्होला , पैँसेरु आदि , नाचमा डिग्रे , गरुवा , पुरानो लठ्ठी नाच , सिँगारु आदि सबैको अत्यन्त बिज्ञ तहबाट कुनै पहल कदमि भयो भने हाम्रो तर्फबाट हृदय देखि साथ समर्थन हुने कुरामा कुनै कसर बाँकी रहने छैन । यी गीत तथा नृत्यहरुको संरक्षण तथा संवर्धनमा कुनै गुन्जायस हुने छैन । दिल खोलेर यतातिर पालिकाको ध्यानाकर्षण हुनेछ ।
साथै हाम्रा पूर्वजहरुले जन्माएका कतिपय जन्म मृत्यु देखिका यावत असल कार्यहरुको रक्षा तथा अहिलेको परिपेक्षमा खराब लाग्ने कुरीतिको निर्मूलका लागि पनि उतिकै पहल गर्नेछ । यसको लागि यथाशक्य विज्ञजनहरुको क्रियाशिलतालाई हामी विशेष प्राथमिकता दिने छौं ।
हाम्रो खाम भाषाको अझै लिपिबद्ध नभएको अवस्था छ। बिशेषत: पुरानो सात गाउँ खोला भनेर चिनिने मैकोट , पेल्मा , हुकाम , रन्मा र अर्जल लगायतका खास मगर भाषाको केन्द्रबिन्दु रहेका गाउँको भाषा लिपिबद्ध नभएको चिन्ता ब्याप्त छ । अब तपाईं आफै यस समुदायको पर्नु भयो , केही योजना बनाउनु भएको छ ?
यसबारे हामी गम्भीर छौं । तपाईंले जुन कुरा उठान गर्नु भयो , यसले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ। साविक हुकाम तथा मैकोट गाविसमा ( अहिलेका वडाहरुमा ) व्यापक रुपमा बोलिने ओर्जिनल मगर खाम भाषाको लिपिबद्ध हुनु अत्याबश्यक छ । यसमा बौद्धिक समुदायको चिन्ता हुनु नितान्त जरुरी थियो । हुनु पर्छ । निश्चय पनि तपाईं जस्ता बिज्ञ साथीहरु जो खोज अनुसन्धानमा लाग्नु भयो भने पालिकाको तर्फबाट सम्भव भएसम्मको साथ समर्थन मिल्नेछ । के कसरी यो सम्भव छ , के के प्रक्रिया पद्धति अपनाउनु जरुरी छ ; त्यो सबै प्रक्रियामा साथ दिन पालिका हमेशा तयार छ ।
– स्वच्छ पानीको आवश्यकता जनतालाई तड्कारो समस्या परेकै छ । अझ पनि प्रत्येक वडामा पानी कै समस्या देखिएको छ । समाधानको उपाय के छ ?
प्रायजसो गाउँ टोलमा पानी पालिका हुनु भन्दा पनि पहिले नै विभिन्न माध्यमबाट पूर्ति भएको छ । कुनै ठाउँमा यसको प्रकृया अझै जारी छ । छिटोभन्दा छिटो कसरी हुन्छ हामी पानीको समस्या हुन नदिने कार्य गर्ने नै छौं । यदि कहि कतै अझ पनि पानीको समस्या छ भने त्यसको बारे छिटो सम्बन्धित वडाको रिपोर्ट आयो भने प्रकृया चाँडै बढाउन पहलकदमि गरिनेछ ।
– सरकारी स्कुल टाढा पर्ने, जहाँ कलिला बालबच्चा जान नसक्नु र निजी स्कुलमा आफ्नो क्षमताले पढाउन नभ्याउने देखिएको छ । सबैलाई आफ्ना बालबालिकाको उचित वातावरणमा पढाउन सक्ने कुनै योजना छ कि ?
सर्वप्रथम कुन ठाउँको कुन बिद्यालयमा यो समस्या देखिएको छ ? त्यो अभिभावकको गुनासो सम्बन्धित बिद्यालय वा बिद्यालय ब्यवस्थापन समिति कहाँ पुग्नु पर्छ । अनि उक्त बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिको र विकट टोलहरुको मागनुसार नै यो समस्याको निराकरण गर्न सकिन्छ । जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय ! परिस्थितिले जन्माउँछ । त्यसमा हामी एकदम सकारात्मक छौं । यसको लागि छुट्टै बालशिक्षाको आबश्यकता पर्छ । यसमा पालिकाले हरसंभव प्रयास गर्नेछ ।
– प्रत्येक वडाका एकाध स्कुल बाहेक अरु स्कुलमा पढाइ राम्रो नहुने , शिक्षक बेलैमा नआउनु , त्यहाँको भौतिक संरक्षण नहुनु तथा अभिभावक र बिद्यार्थी दुबैमा बिद्यालय प्रति उसासिन हुनु कसको कमजोरी हुन सक्छ यो ?
यो पनि सम्बन्धित निकायबाट रिपोर्ट तुरुन्त आउनु पर्छ । कुन बिद्यालयमा के अभाव छ ? कुन शिक्षकले लापरबाही गरिरहेछ ? अथवा आफ्नो उत्तरदायित्व प्रति कुन शिक्षक उदासीन छ ? त्यो पनि खोजि गर्ने काम सम्बन्धित बिब्यसको हो । अनि बिद्यालयको भाैतिक संरचना के छ वा छैन त्यो पनि उक्त समितिले निक्याैल गर्ने कुरा हो । जहाँसम्म पालिकाले गर्नु पर्ने कार्य छ, त्यसमा हामीले कमि हुन दिने छैनौं ।
दोश्रो कुरा, चुनाव लगत्तै हामीले प्रत्येक बिद्यालयका प्र.अ.हरुको भेला बोलाएर उनीहरुसँगै बृहद दंगले छलफल गरिनेछ । अनुगमनलाई यस्तो दह्रो तरीकाले अगाडि बढाईनेछ । अनुगमनको जिम्मा सम्बन्धित वडाध्यक्ष , सदस्य र बिब्यसले गर्नेछ । सम्बन्धित बिब्यसले के माग गर्छ वा सिफारिस गर्छ त्यसैलाई मध्येनजर गरेर आफ्नो कामकार्य अगाडि बढाउनेछ । गडबड गर्ने , आफ्नो समयमा स्कुल नजाने शिक्षकलाई बिब्यसले सिफारिस नगरुञ्जेल शिक्षकको तलब रोक्का गरिनेछ।
– प्राकृतिक सम्पदा र साँस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण हाम्रा गाउँहरुमा पर्यटन प्रबर्द्धन गर्न के गर्नु पर्ला ?
हाम्रो पालिका भित्रका सम्पूर्ण वडामा अवस्थित सम्पदाहरु आफैमा सबैभन्दा बेग्लै तर आफ्नै मौलिकता लिएर, आफ्नै पहिचानमा अझसम्म बाँचेका र जीवन्त रहेका छन् । हामीले तत्कालै यसको पनि उचित संरक्षणमा ध्यान दिनु जरुरी छ । सबै बिज्ञ जनले अबका दिनमा यतापट्टि सोँच्नै पर्ने बेला पनि हो यो । हाम्रा हिमालहरु, नदीहरु, ताल तलैयाहरु, तातोपानी, हाम्रा कला संस्कृतिहरु, हाम्रा जन्म मृत्यु संस्कारहरु सबैलाई ब्यवस्थित गर्नु अपरिहार्य छ । किन कि अबको दिनमा हाम्रो भविष्य पर्यटनमा मात्र उज्जल छ । त्यसैले निकट भविष्यमा गुर्जाघाट देखि यताका प्रत्येक संभावनायुक्त ठाउँहरुमा तत्काल पैदल मार्ग तयार गर्ने हाम्रो योजना छ । सबै ठाउँमा होम्स्टेको लागि उचित तालिमको ब्यवस्था गरिनेछ । साँस्कृतिक कला कौशलका साथै यिनीहरुको लिपिबद्ध गर्ने कुरामा विशेष जोड दिईनेछ । कसरी पर्यटनलाई बढावा दिन सकिन्छ त्यसमा सबै विज्ञजनहरुसँगको गहन छलफल गरेर यसको प्रबर्द्धनमा जोड दिईनेछ । हामी हामीलाई बिश्वास छ, यो गाउँपालीका देशकै नमुना गाउँपालीका बन्छ । यसको लागि हामीसँग यथेष्ट साधनहरुको कमी छैन, केवल त्यसलाई परिचालन गर्न सक्नु पर्दछ ।
-पुथा उत्तरगंगा भौगोलिक रुपमा निकै ठूलो पालिका हो । स्वाभाविक रुपमा यहाँका बस्तीहरु छरिएर रहेकाछन् । यी बस्तीहरु कतिपय निकै टाढा रहेकाछन् । जहाँ बिरामीहरुले बेलैमा आैषधोपचार नपाएर अकाल मृत्यु मर्दैछन् । सुत्केरीहरु बाटैमा मरेको पनि प्रमाणहरु छन् । अबका दिनमा यी र यस्ता घटना नहुन वा सबै वडाका बस्तीहरुलाई पाई पर्ने ठाउँमा औषधी उपचारको लागि के गर्नु पर्ला ?
स्वाभाविक रुपमा यो पालिका निकै ठूलो भूगोल ओगोटेर बसेको पालिका हो । यहाँ कमै वडामा अथवा अहिलेसम्म साविकका केन्द्र रहेका ठाउँहरुमा मात्र यो सेवा उपलब्ध छ । यसको क्षेत्र बिस्तारको लागि छिट्टै नै छलफल हुनेछ । आगामी दिनहरुमा यसको पनि पहल कदमि हुने नै छ । हामी पालिकाको तर्फबाट यसको मागको लागि माथिल्लो निकायसँग एकदम छिटो पहल गर्नेछौं ।
– भएका स्वास्थ चौकीमा स्वास्थ्यकर्मी जहिले उपलब्ध नहुनु , औषधी भने जस्तो नपाउनु, पाए पनि डेथ गएका बितरण भएको जनगुनासो छ । यसमा के कस्तो प्रकृया अबलम्बन गर्नु भएको छ ?
औषधीकोलागि बेग्लै बजेट छुट्याइएको छ । यसरी बजेट छुट्याएर पनि उचित औषधी पाईदैन भने तुरुन्त हाम्रा वडा कार्यालयमा रिपोर्ट दिनु पर्‍यो, त्यसपछि वडाले पालिका हुँदै जिल्लामा पुग्छ । अनि त्यो भ्रष्ट गर्ने र कमिसन खान खोज्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई तुरुन्त आबश्यक कार्वाही गरिनेछ। अबका दिनमा सचेत नागरिकहरु अझ जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्नेछ । हामीले छुट्याएको बजेटबाट कमसल खालको औषधी वा म्याद गएका औषधी वितरण भएमा त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मीलाई बर्खास्तीसम्मको प्रकृया हामीले गर्नेछौं ।
– यो पालिकाका प्रत्येक वडाहरुमा बिजुली बल्नको लागि कहिलेसम्म ढुक्क हुन सकिन्छ ?
कतिपय वडाहरुमा अहिले बिजुली बल्ने प्रकृयामा छन् । तमागर खोलाको लथालिङ्ग भएको बिजुली जहाँ जनताको पनि लाखौँ रुपैया तथा रगत पसिना खर्चिएको छ। त्यसमा पनि तत्काल काम थाल्ने प्रकृयाहरु छन् । सायद फागुन-चैत्रबाट त्यो प्रकृया शुरु हुन्छ । तिनीहरु बाहेकका १४ वटै वडामा बत्ती बाल्नको लागि हामीले करीब तीन करोडको बजेटिङ्ग गरिरहेका छौं । यसले प्रत्येक वडाका घर उज्यालो हुनबाट बञ्चित नहोस् भन्ने हाम्रो धारणा रहि आएको छ । अब म यो साह्रै कडाईका साथ यसबारे काम थाल्ने वातावरण मिलाउने प्रक्रियामा छु । किन कि म पहिलेको लथालिङ्गबाट धेरै नै सचेत भएको छु । अबका दिनमा कमजोरी कदापि नहोस् भन्ने लागेर नै हामी निकै सचेतताका साथ यो पहलकदमिलाई अगाडी बढाउने जमर्को गर्दैछौं । अबको केही बर्षभित्र नै हामी प्रत्येक वडाहरुलाई उज्यालो बनाउने अठोटका साथ लागेका छौं ।
-युवा खेलकुद विकासको लागि के गर्नु पर्ला ?
खेलकुदको लागि तत्काल भन्दा दीर्घकालीन योजनामा छौं हामी । जस्तै सम्भावना भएका प्रत्येक वडामा कम्तिमा एउटा खेल मैदानको पहल गरिनेछ । खेलकुद विकासको लागि खेलाडीहरुलाई विज्ञ कोच मार्फत योग्य र अनुशासित युवा खेलाडी जन्माउने , त्यसले आफ्नो व्यक्तित्व विकास साथै गाउँको इज्जतको सवालसँग पनि यो जोडियोस् । त्यसैले आगामी दिनमा पालिकास्तरीय खेलको आयोजना गरिनेछ । जो एउटा निश्चित ठाउँमा मात्र नभई पालै पालो सम्पूर्ण वडाहरुमा प्रत्येक बर्ष आयोजना गर्ने पहल गर्न सकिन्छ । यस बारे पनि युवा माग वमोजिम अगाडि बढिनेछ । त्यसको लागि सबभन्दा पहिलो कुरा खेल मैदानको आवश्यकतालाई पूर्णता दिने कामलाई प्राथमिकता दिईनेछ ।
– सूचना सञ्चारको युगमा छौं हामी , तर अझै पनि हाम्रो सञ्चार सेवा भने जस्तो नभएको स्थिति छ ; के होला समस्याको समाधानको उपाय ?
पहिलो समस्या त कमसलवाला टावरको हुन सक्छ । यसको अध्ययन गर्नु जरुरी छ । दोश्रो, सामान खरिद गर्दा कमिसनले गर्दा गडबडी हुने । जस्तै सिप्या, मैकोट र बिर्गुमको लागि भनेर ल्याईएको सोलार र ब्याट्री रातारात कतै साटियो रे भन्ने अपुष्ट खवर छ । यदि त्यस्तो हो भने त्यो कर्मचारी वा सम्बन्धित जो कोहिलाई पनि पहिचान गरि तुरुन्त कार्वाही गरियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । तेस्रो सिप्याको पालेको लापरबाही हो भन्ने सुन्नमा आएकोछ । यदि त्यो भने त्यसलाई स्पष्टीकरण ल्याईनेछ । अबका दिनमा सञ्चार क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकाको सूचिमा राखेर यसको स्थायित्वको लागि ध्यान केन्द्रीकृत हुनेछ ।
– कुनै कुनै वडा तथा गाउँमा अझै टावर नपुगेको (जस्तै पुथा उत्तरगंगा वडा नं. २) अवस्था छ , अब प्रत्येक जनताको पहुचमा सञ्चार उपलब्ध गराउने कतिको पहल कदमि छ ?
आगामी दिनमा भएको सञ्चारलाई स्थायित्व दिने काम गरिनेछ। बाँकी सञ्चारले नभेटेका गाउँ ठाउँमा टावरको उपलब्धता बारे केन्द्रीय बजेट र पहलको बारे गम्भीरतापूर्वक सम्बन्धित निकायलाई ध्यानकेन्द्रीत गरिनेछ। यसको लागि पालिकाको अगुवाईमा पहल गरिने छ । यो केही बर्षभित्रमा पूरा गरेरै छाडिने छ ।
–कर्मसही घर्ति मगर
पोर्चुगलमा हुन् लागेको कराँते अाेपन लिस्वनमा नेपालबाट हिक्मत घर्तीमगर
चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्षमा निकिता पौडेल नियुक्त
पूर्वमन्त्री तथा वामपन्थी नेता पद्मरत्न तुलाधरकाे निधन
पोखरामा मोडलिङ मोह उकालो लाग्दै